तरलता समस्या चरम सीमामा पुग्यो ! - Laltin Media
Home»आर्थिक समाचार»तरलता समस्या चरम सीमामा पुग्यो !
तरलता समस्या चरम सीमामा पुग्यो !
पछिल्लो केहिदिन यता बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । पैसाको माग अत्याधिक हुने तर माग अनुसार प्रणालीमा पैसा नथपिँदा तरलता अभाव चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबार बैंकिङ प्रणालीमा १५ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता थियो ।
आइतबार बढेर १५ अर्ब पुगेको अधिक तरलता सोमबार भने प्रणालीमा आठ अर्ब मात्रै देखियो । सरकारले दैनिक खर्च बढाएर एक अर्बको हाराहारीमा पुर्याएको छ । महालेखाका अनुसार गत चैत १० गतेसम्म सरकारले ८५ अर्ब मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको थियो ।
पछिल्लो १० दिनमा उक्त खर्च बढेर ९४ अर्ब रुपैयाँमा उक्लिएको छ । गत १० दिनमा मात्रै सरकारले ९ अर्बको हाराहरीमा खर्च गर्यो । तर उसको खर्च भन्दा १० गुणा बढी बजारमा पैसाको माग छ । जसले गर्दा सरकारको खर्चले समेत यति बेलाको सङ्कट समाधान गर्न सकेको छैन । पैसाको माग घट्नुको सट्टा थप बढ्दै गइरहेको छ ।
बढ्दै गइरहेको सङ्कटलाई टार्न बैंकहरुले हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । हरेक दिन जसो बैंकहरुले स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गर्दै आएका छन् । गत साउन १३ गते देखि उक्त सुविधा प्रयोग गर्न थालेका बैंकले १८० पटक उक्त सुविधा मार्फत ५३ खर्व रुपैयाँ चलाइसकेका छन् । ओभर नाइट रिपोको समेत रफ्तार तीव्र छ। उक्त सुबिधा मार्फत मात्रै बैंकहरुले एक खर्ब ३६ अर्ब चलाएका छन्।
अन्तर बैंक ब्याजदर समेत आकासिएको छ । अधिकतम सात प्रतिशतसम्म कारोबार गर्न सकिने उक्त सुबिधा अहिले सात प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । ६.८० देखि सात प्रतिशतकै हाराहारीमा अन्तर बैंक ब्याजदर रहेको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।